Wonke umntu uyazi ukuba umlawuli weenkampani akanikwa loo ndlela. Ngoko ke, ukuba unikwe umlawuli, ngoko ufanelwe le post. Kodwa, indlela yokukhokela, ukuba unikwe umsebenzi oqhelekileyo okanye uqhube ukukhula komsebenzi wakho ngokukhawuleza? Siza kuthetha ngako konke oku kwinqaku: "Indlela yokuziphatha xa ukhethwe njengomlawuli weenkampani."
Ngoko, indlela yokuziphatha xa ukhethwa njengomlawuli weenkampani? Okokuqala, makhe sizimisele ukuba ngaba ungumqeshwa wale nkampani ixesha elide. Emva koko, kwenzeka ngokwenene ukuba umntu wenza umsebenzi okhawulezayo, ukusuka kumphathi ophakathi ukuya kumphakamileyo. Ukuba ngaba ngumlawuli ngale ndlela, ngoko kule meko kukho i-pluses kunye ne-minuses. Izinzuzo kukuba uyazi "umphefumlo" wenkampani, cinga indlela amasebe asebenza ngayo okanye ngabasebenzi ngabanye. Ngubani onokuthenjwa kwaye ngubani onokumthemba. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, xa uba ngumlawuli, abaninzi baqala ukukukhwele, ngokucacileyo okanye ngasese. Ngokuqinisekileyo, baya kuzama ukuphazamisa ubomi bakho, baze basuswe kwiofisi. Ngethuba elifanayo, abanye abasebenzi osebenza nabo ngokufanelekileyo bayavuya ngokwenene ukuba unyuliwe, kodwa uya kulindeleka kuwe ukuba ube nesimo esithembekileyo. Ukuba wenqaba into ethile ngandlela-thile, baya kuthatha ukuhlambalaza kunye "nesifo seenkwenkwezi". Unokuqiniseka njani ukuba inyaniso yokuba unyuliwe kwisikhundla esiphakamileyo ayizange iphenduke ibe yinyundo.
Okokuqala, zama ukuziphatha ngendlela enganiki izizathu ezicacileyo zomsebenzi wabantu abakhwele. Ewe, baya kufumana isizathu sokukuthululela ukungcola, kodwa ukuba kucinga, akukho mntu uya kubaphulaphula. Kodwa ukuba kukho intle yenyaniso inhlebo, i-ofisi yonke iya kukuxubusha ngentetho. Ukuphelisa umona wenjabulo kwaye uzame ukulawula ukuziphatha kwazo. Kwakhona, uqaphele ukuba aba bantu bangangcolisi ngomsebenzi, ngaloo ndlela, ukuphanga ngolunye uhlobo lweentengiso. Wena, usebenza kule nkampani iminyaka engaphezu konyaka, kufuneka ukuba ubuncinane ubuncinane ukuba uyaqonda ukuba ubani onako oku. Ngoko ke, zama ukuzithoba kwiimeko ezithintekayo kuphela kubantu abathembekileyo, kwaye ukuba oko akusoloko kusebenza, khangela yonke into kwaye uqinisekise ukuba awunakulungiswa naphi na.
Kodwa indlela yokuziphatha ngayo nabahlobo bakho basendulo? Aba bantu bekunye ukusuka ekuqaleni, udlulisele kakhulu kunye nabo kwaye bavuya ngokunyanisekileyo ngoyiso lwakho. Ungayifumana njani indlela yokuphuma, ukwenzela ukuba bangacasuli kuwe. Okokuqala, kufuneka baxoxe ngezinto zonke. Emva koko, unabantu abadala abantu abafundayo, ngoko uxoxe ngeemeko ngokuqhelekileyo. Kungcono ukuba nencoko kwisimo esingacwangciswanga ukuze bangabi ngathi baphantsi. Xoxa nabahlobo bakho kwaye uchaze ukuba ngaphandle kweofisi uhlala ungumhlobo wabo, ngubani olungele ukukunceda nokuxhasa yonke into. Kodwa, xa usebenza, kufuneka ugcine ukuthotyelwa. Ngoko ke, khawuleza uxwayise ukuba awuyi kubaxolela zonke iimpazamo kwaye ubhale ebusweni. Ewe, njengawe nawuphi na umntu kwaye, ngokukodwa, ungumhlobo, uya kuzama ukuqonda nokuxolela iimpazamo ezithile, kodwa akukho namnye kubo onokuthabatha ubuhlobo kunye nomlawuli, njengoko oku kungalunganga kwaye akuqhelekanga. Ngokwemvelo, banesiphambamenti esincinci kwaye uya kuhlala udibana nabo, kodwa kuphela ukuba uyazi ukuba le nto ibaluleke kwaye ibaluleke kakhulu. Ngaphandle koko, zonke izicelo zabo kunye namatyala baya kuqwalaselwa kunye neengxaki zabanye abasebenzi.
Ngokuqinisekileyo, akuyena wonke umntu oza kuthatha le ntetho ngovuyo, kuba, ngamnye wethu ufuna ukuba nomntu osondeleyo kwicandelo, kwaye ungawuqhubeli i-robot ibe ngamadevu. Kodwa, ukuba ngabahlobo abalungileyo nabathembekileyo, baya kukuqonda ngokukhawuleza baze bamkele isikhundla sakho. Ukuba ubona ukuba wenze iphutha kumntu, kwaye ngoku ukhalimela amazinyo kuwe, qaphela umntu onjalo. Inyaniso kukuba uyingozi kunabantu abanobugwenxa, kuba unamakhadi akhe. Ngokungafani nabo, owayengumhlobo uyazi kakhulu ngawe kwaye, ukuba kuyimfuneko, uyayidlala. Ngako oko, kuba nabantu abanjalo baqaphele, kwaye ukuba nabo beengcali ezimbi - umlilo ngaphandle kwesazela sesazela.
Ngoku, makhe sithethe malunga nendlela yokusebenza xa ufika kwiqela elitsha ngokupheleleyo, kwaye ngokukhawuleza kwi-post of director. Okokuqala, akudingeki uqale ngokukhawuleza ukutshintsha into ethile. Kuya kuba nzima ukuba iqela lizenze utshintsho olwenziwa ngabantu abatsha ngokupheleleyo. Ngokukodwa ukuba babethanda kakhulu kwaye baxabisa umlawuli wangaphambili. Ngoko, okokuqala, jonga nje abasebenzi. Kufuneka ukuba ubuncinci uqonde indlela ekusebenzeni ngayo ngokufanelekileyo kwaye ngokuvisisanayo, kwaye unqume ukuba kulungile ukuba utshintshile into okanye ayikho. Ukuba usenza isigqibo sokutshintsha, zama ukwenza konke ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. Vumela abantu babe nexesha lokufundela yonke into, ukuze imithetho nemithetho yakho entsha ingabangela ukuba bayichanye. Khumbula ukuba xa umntu esebenza ngamandla kwaye emthiye umphathi wakhe, ukuveliswa komsebenzi wakhe kuwela ngokukhawuleza. Ngoko ke, yenza ngokuhlakanipha.
Kwakhona, zama ukukhetha ukuba ngubani onokumthembela, kwaye ngubani omele aqikelele. Ungalokothi u thembele abo bavela kukuqala kukubonga kwaye bafuna ukuba ngabahlobo. Ewe, mhlawumbi ngumntu onomusa kwaye onobungane. Kodwa, ngokuphindaphindiweyo, abo bafuna ukunyamekela umphathi wabo okanye, ngokuchasene, baba ngabahlobo, baziphathe ukuze bafunde zonke iimfihlelo, baphambukise ingqwalasela baze baxoshe. Ngoko ke, qaphela kwiqela elitsha. Phatha abantu ngomusa, kodwa ungazivumeli uqalekiswe kwaye uhlaziswe emva komva wakho. Kwakhona, ungazami ukujoyina iqoqo, uziphatha nabantu bonke ngokulinganayo. Khumbula ukuba ungumlawuli, ngoko, ukuziphatha kwakho kufanele kufane neposi. Njalo uzame ukugcina ukuthotyelwa, kodwa, ngelo xesha, ungalisebenzisi kakubi igunya lakho. Iqela kufuneka liqonde ukuba ungumkhokeli ontle ngokwenene, uhloniphe wena, mhlawumbi kwindlela yakho yokuthanda. Kuphela ukuba ngaba kunjalo, uya kuba nokusebenza nokuphuhlisa inkampani ngokuqhelekileyo.
Iqhinga lokuphumeza umsebenzi ophumelelayo
Ubomi bomntu siqu u-Urgant Ivan
Iibhatateshi kunye nomzimba: senza kwisitya esiqhelekileyo kwindawo yokudlela yokudla
Imilenze efanelekileyo: indlela yokukhetha iilwimi ezilungileyo
Indlela yobuhlanga kwimbali yefashoni
I-grapefruit ebhaka kunye nobusi
Ulwaphulo lobugcisa - uncedo kumntwana omncinci
Imimoya eMoscow ngoJuni 2016: Ukulungiselela ihlobo ngokufanelekileyo!